SHIRKII ISTAMBUUL QAYBT 3AAD by OMER SULEIMAN ALI(Hadhwanaagnews) Saturday, June 09, 2012 Waxaan weli ku jiraa qodobadii ka soo baxay shirkii Istambuul loogu qabtay Soomalida farqadiisa Siyaasadda. Sida aad garan kartaan Waxaan weli ku jiraa qodobadii ka soo baxay shirkii Istambuul loogu qabtay Soomalida farqadiisa Siyaasadda. Sida aad garan kartaan siyaasadu waa tabta iyo xeesha ay tahay in la adeegsado si lagu gaado yoolka loo socdo. Marka qodobada Siyaasadda waxaa laga dheehan karaa siyaasadda ay beesha caalamka doonayso in ay Soomaaliya uga gaadho danta ay ka lee dahay, laakiin siyaasadaasi ma ah mid ay Soomaalidu samaysatay oo ay iyagu doonayaan in ay ku gaadhaan yoolka ay Soomaalida la doonayaan in ay ku gaadhaan. Halkaas waxaa ka cad in siyaasadda ku socota Soomaaliya aanay ahayn mid Soomaalidu waddo ee ay tahay mid ay Itoobiya uga xoog badan tahay. Qodobka ka
midka ah qodobada Siyaasadda ee aan maanta doonayo in aad diiradda saaro waa qodobka 7aad oo dhigan sidatan.
Wuxuu shirku soo dhoweynayaa in ay gudiga loo xolo in ay soo xolaan xubnaha baarlamaanku ay ansixin doonaan dastuurka ku meel gaadhka ah ee Soomaaliya. Waxay hoosta ka xariiqeen in ay dastuurka hadda lagu ansixiyo in dadka ka wada doodo ka dibna afti loo qaado markii la gaadho goorteeda. Wuxuu kale oo shirku ammaanay wada tashiyada hadda socda iyo habka dadka loogu soo celinayo dhaqankii magaalo joognimada si dadka Soomaalida ah codkooda loo maqlo ayna geedi socodka siayaasadda uga qayb galaan. Wuxuu shirku ka codsaday saxiixayaashii Roadmapka in ay arrinka ku fidiyaan dhulalka laga qabsado Shabaabta. Qodobada ay ku soo qaateen halkan sida aad aragtaan waa ansixinta dastuurka, marka haddii aan idin xasuusiyo dastuur in lagu dhaqmo waa arrin diinta Islaamka ka soo horjeedda oo shirki iyo gaalnimo aan toobad lahayn salka ku haysa. In uu adduunka oo dhammi isu bahaysto Soomaaliya dastuurkeeda oo muhimad intaas leeg la saaro waxay muujinaysaa danta laga lee yahay weynaanteeda. In ummad diinta laga saarana wax gaalo uga weyni ma jirto, Allaha ay run oo dhammi ka isaga ka soo jeeddo ayaana sidaas kitaabkiisa kariimka ah الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ(البقرة 147).
Aayadda uu Alle noogu sheegayo in gaalo ay doonayaan in la wada gaaloobo waa middan aan hoos ku soo qaatay. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا(النساء 89).Wax kale ma doonayaan in aad sidooda oo kale gaalawdaan mooyee ee ruux iyaga ka mid ah ha soo dhoweysnina in ay sidiinna oo kale Alle dartiis u soo qaxaan mooyee, marka haddii ay diidaan in ay soo qaxaan gacan kulul ku qabta oo ku laaya meel alla meeshii aad ku argtaan kaalmo iyo hiillo toonana ha ka doonina.
Waxaan jeclahay in aan wax kasta ku beego xog warrankii uu Alle noogu soo dhiibay rasuulkiisa scw waayo waa waxa runta ah ee jira wixii kale oo dhammi waa been aan raad lahayn. Dad badan ayaa igu canaanta tin aan diinta ku gabanayo laakiin waxaan lee yahay kuwaasi waa kuwo in ay diinta dagaal kula jiraan aan is ogayn diinta iyo Alle mooyee wax kale oo adduunkan lagu qiimeeyaa ma jiraan. Waxay doonayaan inta ay hadalkii iyo waanadii Alle na siiyey ay tuuraan in ay fikirkooda kaaga dhigaan midka xaqa ah. Sidaas darteed wuxuu adduunku ugu daba faylay dastuurka Soomaalida waxay doonayaan in ay Alle iyo ummadda islaamka kala geeyaan oo ay na gaaleeyaan sidooda oo kale. Sidaas darteed ruux kasta oo ka qayb qaata qorista, ka dhaadhicinta dadka iyo ansixintiisa dhammaan waxaan hubaa in ay ku socdaan jidkii Alle naga xaaraantimeeyey ee uu dhahay shaydaanka ha raacina waayo wixii aan Alle ahayniba waa shaydaan. Ugu horrayn waxaan ka soo hor jeedaa dastuur in lagu dhaqmo oo sida Alle noo sheegay ah mushriknimo iyo gaalnimo, waxayna doonayaan in ay gacantooda ku hubiyaan gaalnimada.
IN DASTUUR AAN AHAYN KII ALLE ADDOOMADIISA UGU TALADAY GALAY LAGU DHAQMAA WAA MUSHRIGNIMO, GAALNIMO IYO FAASUQNIMO OO AH QOFKA XADKII ALLE KA BAXAY.Waxaa sidaas Alle noogu sheegay saddexda aayadood ee caanka ah ee ku jira suuradda Al-Anfaal oo kala ah aayadaha 44, 45 iyo 47.
Sidaas darteed waxaas oo dhammi waxay isku dhalayaan in dhagar naloo maleegayo, shirka lagu qabanayo Turkigana naloo tusayo in shirku culus yahay oo la doonayo in Soomaaliya wax loo qabto. Hase yeeshee dadku awood ma u lee yihiin in ay wax u qabtaan Soomaaliya waa mayaز قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ(البوبة 51). Sida ka muuqata aayaddan wuxuu Alle na farayaa in aynu u sheegno gaalada in wax uusan Alle nala maagini nagu dhacayn isaga ayaana noo ah madax ee dadka muminiinta ahi ha ku kalsoonaadeen. Qofka ay la tahay in aadami cadaab uu ku jiro ka waari karaan waa gaaloobay, sidaas darteed intii safarka ugu baxday in ay la shiraan gaalo iska dhigaysa in ay Soomaaliya wax siin karaan ama wax u qaban karaan waxaan lee yahay ha toobad keenaan. Mana aha in ruux muslim ahi uu rumeeyo in nabad iyo barwaaqo ruux aadami ahi u hayo, ciddii wanaag adduunyo iyo mid aakhiro rabtaana waa in ay Alle u hoggaansamaan. Waxay isku magacaabeen deeq bixiyeyaal magacaas ayaaba ah xaaraan oo macnihiisu yahay Alle sheegasho ninkii dhaha deeq bixiyeyaalna waa hadal gaalinimo huwan waxayna la mid tahay isaga oo ku sheega Ilaahayo waayo Alle ayaa deeqda bixiya. Wuxuu Alle aayaddan noogu sheegayaa in ay deeqda bixiyaan iska dhaafe haddii ay iyagu hayn lahaayeen deeqda Alle oo dhan qof keliya afkaas uma saareen أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا(النساء 53).
Marka sidee ugu magacaabaysaa deeq bixiyeyaal iyagu isku magacaabeen iyaga oo doonaya in ay diinta ku dhaamaan. In lagu magacaabo iska dhaafe in wax loo doonto ayaa xaaraan ah. Waxaa kale oo qodobka 7aad lagu xusay in wada tashigu si fiican u socdo ayna tahay la sii wado si cabashada qofka Soomaaliga ah loo maqlo. Suaashu waxay tahay yaa la maqasiinayaa codka Soomaalida? Waxaa ila habboon in ciddii dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysata wax ka qaban karta oo keliya in la maqashiiyo codka, laakiin ruux in uu cid wax u qabto iska dhaafe aan isagu naftiisa waxba u tari karin in aad u malayso in uu wax kuu qaban karo waa iimaan xumada uu darteed Islaamka u rogmanayo. Waxaan idin xasuusinayaa hadalkii uu nebi Ibraahiim ku dhahay aabihiis ee ahaa ma waxaad caabudaysaan wax aan waxna idiin dhimi karin waxna idin tari karin. Gaalada isu bixisay deeq bixiyeyaal waa qaldan yihiin innaguna in aynu ka siii daba qaldanno ma aha oo ugu yeedhno deeq bixiyeyaal. Deeq iska dhaafe waxyaabaha ay bixiyaan sadaqo ma aha. Wuxuu kale oo shirkii Istambuul ay gaaladu ka codsadeen in gaalnimada lagu fidiyo dhulka Shabaabta laga qabsado.
QODOBKAN WUXUU SALKA KU HAYAA GAALNIMO IYO SHIRKI WAXAANNA UMAMDDA SOOMAALIYEED UGA DIGAYAA IN AY WAX TAAGEERO AH SIIYAAN. MA AHA QODOBKAN OO KELIYA LAAKIIN WAXA SOCDA EE AY GAALADA IYO MUNAAFAQIINTU HOR BOODAYAAN OO DHAN AYAA XAARAAN AH UNA BAAHAN IN LAGA KALA DAREERO. OMER SULEIMAN ALI 08/06/12